मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदै, को को बन्लान् मन्त्री ? – Himshikharnews.com
मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदै, को को बन्लान् मन्त्री ?
१० भाद्र २०७८, बिहीबार १०:१३
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै हप्ता मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन् । उनले गठबन्धन दलका नेताहरुसँग मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे परामर्श सुरु गरिसकेका छन् ।
देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरी भोलिभित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन् । मन्त्रिमण्डलमा माओवादी र नेकपा एसले ६/६, जसपाले ४ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । बाँकी मन्त्रालय नेपाली काँग्रेसले लिनेछ ।
जसपाबाट फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरम भने सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । देउवाले लोसपालाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छैनन् ।-reportersnepal